Pazuva rino: Steve Jobs anopa iyo iPhone 4 | IPhone nhau
Miguel Hernandez | | iPhone 4, IPhone Zviteshi
Iyo ndeimwe yeakanakisa uye akasarudzika mafoni munhoroondo. Akaunza iyo shanduko kune dhizaini yenhare, kubva pazuva iro, zvaive zvakakodzera kuti mafoni emafoni aisangova makuru chete, asiwo akanaka. Iyo iPhone 4 yakagadzirwa nemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvakanyatso kuunganidzwa, zvichipa fungidziro yekuti isu taive tisina chete runhare, isu taive nechishongo, chishongedzo. Yaive muna Chikumi 7, 2010 apo Steve Jobs paakapa iyo iPhone 4 panguva yeWWDC, imwe yehurukuro dzake huru (kana yaive neipi yakaipa), mudziyo uri pamberi penguva yacho maererano nedhizaini.
Kana uchitaura nezve iyo iPhone 4, zviri nyore kurangarira antenna matambudziko uye zvimwe zvipembenene. Pasina kutaura, kuti mapatya mukoma, iyo iPhone 4s, zvakanyanyisa kuidarika maererano nehurongwa, muchokwadi, hazvishamise kuona nguva nenguva inoshanda iPhone 4s. Nekusvika kweiyo iPhone 4, Steve Jobs akaunza zvinopfuura kungori foni, yakaratidza chiratidzo chekuzivikanwa, hunhu. Kubva ipapo, kumberi kumberi kweiyo iPhone hakuna kuchinja zvachose, makona akapoteredzwa aive pano kuti agare, uye ivo vachiripo. Tinokusiyira ipfupi yekuratidzwa kweiyo iPhone 4, kubva pamaoko eCupertino guru, Steve Jobs.
Ichokwadi ndechekuti iwe une ruzivo rwakakwana rweChirungu kuti unzwisise kubatanidzwa kwaSteve Jobs nekuratidzwa kwechigadzirwa. Yese mharidzo yeApple munguva yaSteve Jobs yaitaridzika kunge ingano, uye iyo yeiyo iPhone 4 yaisazove shoma. Semashoko, iyi mharidzo yaive izere nevagadziri, pane dzimwe nguva, mharidzo dzinoitwa chete kune vezvenhau uye vashandi veApple. Iyo iPhone 4 yakajekesa kare uye shure mukugadzirwa kweterefoni, kutaura zvazviri, iwo muenzaniso watinosuwa tese.
Chii chitsva? Iphone 4
Iyo iPhone 4 yakavhurwa padivi peiyo iPad, gore rimwe chetero. Izvo zvaive ipapo, kumisikidzwa kwehukama pakati pemidziyo yeIOS, kusangana pakati pezvose kwaive kiyi, uye nhasi kwaendeswa kune kwakanyanya. Asi kwete izvo chete, padanho re software, tinowanawo kuratidzwa kweFace Nguva, Apple's VoIP yekufona uye vhidhiyo yekufona system, inowanikwa pakati pezvigadzirwa kubva kukambani yeCupertino. Zvakare, kamera yakagashira kumeso kwakanaka, iyo 5 Mpx yaizoperekedza Apple kwenguva yakareba, uye flash re LED raive pano kuti rigare. Iyo yekumberi kamera, zvisinei, yaive neVGA mhando.
Retina screens akasvikawo, resolution ine kana mana pixels kupfuura iyo iPhone 3Gs, iyo inonzi munguva pfupi, skrini yakadanana nemusika kwenguva refu, iyo yavave kuramba vachichengetedza, kunyangwe hazvo vamwe vachibvunza yavo nzira inoenda kuOLED zvinonzwika. Zvisinei, chimwe chinhu hachina kuchinja, Apple haina kufunga kusiya 3,5 inches, Steve Jobs akanyevera kuti yaive saizi yakakwana kushandisa chishandiso chakadai, kunyangwe asati atisiya isu, akaunza chishandiso chemasendimita mana. Hatizive kuti aifungei nezve iyo 6-inch iPhone 4,7.
Panguva imwecheteyo, nhangemutange yekutetepa yakatanga paApple, makumi maviri neshanu muzana yakaonda kupfuura ma24G. Nekudaro, iyo processor uye RAM yanga isingave pakukwirira kweti retina kuratidza, ichigadzira ngano yechinyakare yehupenyu hupfupi hwebhatiri muPhones, chiitiko chinozogadziriswa mune ramangwana. Zviri pachena kuti iyo iPhone 3 yanga iri imwe yeanonyanya kunyepedzera uye akakodzera mharidzo dzenguva yeApple mufoni Wanga uine iPhone 4 here kana kuti uchiri nayo? Tiudze nezve chiitiko chako nazvo, uye pamusoro pezvose, kana zvaive zvakakodzera kutenga kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 4 » Pane zuva rakaita nhasi: Steve Jobs anopa iyo iPhone 4
Toni Lara akadaro
Iyo iPhone 4 ndiyo yaive yekupedzisira iPhone yandaive nayo, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Asi ini ndinochengeta ndangariro yakanaka kwazvo nezvake: Ndakaitenga nguva pfupi mushure mekubva nechipo kubva kuVodafone icho panguva iyoyo chaive chisina kushata, uye ndakachiregerera kusvika makore matatu apfuura kana zvishoma zvishoma, apo iye atove kupfuura kupfuura hama dzake mukuru. Foni yangu yapfuura yaive yeAmerican iPhone 2G yandakadanana nayo pandangoiona ichishambadzwa panhepfenyuro, muruoko rwaSteve Jobs, uye zvinhu zvaida kuti dzimwe hama dzainge dzichitenderera kuUSA dzingauye nadzo kwandiri; zvisati zvaitika, akati wandei Motorola anga asiri mafoni efoni asi aive nekamera uye mamwe mapijaditas, uye pamberi peaya Alcatochos akapusa aingoshanda kufona nekutumira SMS XDDD
Ndiri kutenderera musango! Ndakatambura neantenagate (ndanga ndataura nezvayo, kunyange hazvo ndisina kuwedzeredzwa sevamwe vakaipenda), ini ndaive mumwe weavo vakagashira kavha yemahara kubva kuApple nekuda kwedambudziko (rekutanga bhamba, raimukodzera segurovhosi) iine uye Pasina kupunzika kwejere, aindiperekedza panzendo refu uye mazuva ese achifamba kunge shasha uye ndinofunga ndiyo yekupedzisira yakamuuraya: Handizive kana yaive mhosho yemhando yacho pachayo, asi nzendo mbiri dzezuva nezuva awa kana zvakadaro imwe neimwe muRENFE Cercanías ine Tunnel nzvimbo uye ruzhowa ruchingouya ruchienda, zvichinyatsokangwa. Yakatanga nechena machena uye yakazopedzisira isisatombotanga zvachose. MuApple Chitoro ivo vakanditengesera imwe yekutsiva nekuti yaive isisiri pasi pewarandi, joke harina kuuya zvakachipa asi zvakaita kunge zano rakanaka ... kukanganisa kukuru: mwedzi minomwe kana misere gare gare, payakange iri kunze garandi yeaya anotengeswa neApple Sekutsiva, zvakangoitikawo kwaari uye ndakazopedzisira ndafunga kuti yaive nyaya yemhondi chitima mhedzisiro uye kudonhedza kwaro kwese.
Pazvakaitika ndainge ndisisipo pabasa rekutenga imwe iPhone. Izvo hazvina kubatsira kuti ini ndaive (uye ini ndiri) fan of the jailbreak uye mikana yayo nekuti yakabva kune iyo American 2G iPhone iyo yaida kuti ishande kuSpain, uye sezvo zvainge zvichinyanya kuoma kuwana iyo jailbreak uye Apple yaive kuvhura vhezheni dzisingawanikwe zvakanyanya dzeIOS. Nekufamba kwenguva, vakazondikurudzira kuti ndiende "kune rimwe divi", iyo ine green green (kunyange ndakaita zvakanaka ndikaenda kuNexus 5 ichiri kundirambira), uye ndipo pakaguma ruzivo rwangu rweApple. Ini ndinosuwa runako rweiyo modhi, zvinhu uye ruzivo rweIOS iyo Android haina ... asi ini handipotse chinobatanidza chinobatanidza kana kutsamira paTunes yezvinhu zvipi kana kuvharwa kweiyo inoshanda sisitimu. Izvo zvazviri, ini handisi kuzotanga chero mushandirapamwe kana kutsoropodza zvine mutsindo, munhu wese anounganidza mapoto avo sezvavanoda uye Apple anozviita nenzira iyoyo, uye havahwande kana, saka chero munhu asingazvifarire sezvandinogara ndichitaura, kune zviuru zveimwe sarudzo.
Zvisinei, ndinofunga ndiri mumwe wevanhu ivavo vanga vari kumativi ese "ehondo" uye havagone kuuya kwauri nehondo dzinofarira kubva kudivi rega. Ndicharamba ndichichengeta iyo iPhone 4 mundangariro dzangu, senge pandinorega Nexus 5 yandinayo iye zvino. Zvichauya zvinotevera, zvichaonekwa be
Pindura Toni Lara
Ndinokutendai zvikuru nekupa ruzivo rwenyu uye ruzivo.
Zvakakwana zvinoenderana nechinyorwa. Iyo
iPhone 4 yakamirira ngano kusvika padanho rekugadzirwa kwemafoni, runako, mutete, magumo akakwana uye skrini iri pamusoro pemakwikwi panguva iyoyo ndizvo zvakafarirwa nevanhu vazhinji (neni pachangu) uye ndine chinhu ichi chakanaka shuwa runhare. Kubva ipapo ini ndinoshandisa iPhone asi kubva pakabva Steve mukuru isu tinofanirwa kutendeseka kuti Apple yakadonha maererano nehunyanzvi, iyo iPhone inoramba ichishaiwa. Ndinovimba mune isiri kure kure ramangwana Apple ichave iine kana 50% yezvinhu zvitsva zvayakaita naSteve uye ivo vacharamba vachiratidza isu zvechokwadi Revolutionary zvigadzirwa senge iyi iPhone.
Pindura kuna Elvin
Ndiri kufara kuti unofarira Elvin
13 "MacBook Pro Concept ine OLED Ratidza yezvinhu zvinogadziriswa
Zvisinei nekota yekupedzisira yemari, Apple inokwira padhorobha reRune 500 runyorwa